SKU: 203849-91-6. Sokajy: R & D Reagents
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filaharan'ny MMAD (Demethyldolastatin 10) (CAS 203849-91-6), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Ankoatra izany, MMAD dia voalaza fa ampiasaina amin'ny famokarana konjugates mifandray amin'ny zava-mahadomelina antonoka (NDC). Ao amin'ny NDC, MMAD dia mifamatotra amin'ny antibody anti-5T4 na antibody anti-Her2. Naseho fa ny NDCs dia mampiseho ny fahombiazana sy ny pharmacokinetics.
MMAD (Demethyldolastatin 10) fototra karazana
Meny fitetezana 771.06
Storage Temp: Pulver -20 ° C 3 taona
4 ° C 2 taona
Amin'ny solvent -80 ° C 6 volana
-20 ° C 1 volana
Color: Fotsy amin'ny fotsy (fotsy)
MMAD (Demethyldolastatin 10) (203849-91-6) ampiasaina amin'ny tsindrona steroids
Synonymes: Demethyldolastatin 10 (203849-91-6); Monomethylauristatin D; Monomethyl Dolastatin 10
Fampitandremana amin'ny MMAD (Demethyldolastatin 10)
Ny vokatra dia tsy voamarina tanteraka amin'ny fangatahana fitsaboana. Ny fanaovana fikarohana ihany no ampiasaina
Mba hahazoana solosaina ambony kokoa, manaova fampangatsiahana ao anaty 37 ℃ ary atsofohy ao anaty efitrano ultrasonic mandritra ny fotoana maromaro.
Ao amin'ny Vitro: MMAD (Demethyldolastatin 10) (203849-91-6) dia mifamatotra amin'ny dingam-pandaminana mihinam-panafody mba hanomezany konjugata maromaro akaiky-homogène-antibody (ADC) miaraka amin'ny tahan'ny antibody ~ 2.0. Ireo konjuga miteraka vokatra dia mampiseho tsara ny famokarana pharmakokinetika, izay mahomby amin'ny vitan'ny cytotoxika amin'ny sela HER2 +. Raha ampitahaina amin'ny ADC izay novolavolain'ny cystine alkylation taorian'ny fihenan'ny disulfide natiora, dia hita fa mampitombo ny cytotoxicose ao amin'ny vitro ny ADN izay tsy miteraka amin'ny ADN
Ao amin'ny Vivi: Ny antibody mpanamboatra zava-mahadomelina (ADC) dia manaporofo ny fiverenan'ny fivontosana amin'ny fitevehana. Manana soso-kevitra momba ny toxicology ihany koa izy ireo amin'ny raty.
Ahoana no hividianana MMAD; Buy Demethyldolastatin 10 from AASraw
Afangaro ny vovo-dronono